NASA Cusbooneysiin Cusub oo ku saabsan Daah-furka iyo Ku-xidhashada Hawlgalka SpaceX Crew-3
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » NASA Cusbooneysiin Cusub oo ku saabsan Daah-furka iyo Ku-xidhashada Hawlgalka SpaceX Crew-3
NASA waxa ay cusboonaysiinaysaa daboolka soo saarista iyo xidhidhaynta soo socota ee hawl-galka hay’adda SpaceX Crew-3 oo ay la socdaan cirbixiyeennada Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare. Tani waa hawlgalkii saddexaad ee wareejinta shaqaalaha oo ay la socdaan cirbixiyeeno ku sugan dayaxgacmeedka SpaceX Crew Dragon iyo duulimaadkii afraad ee cirbixiyeenada, oo ay ku jiraan Duulimaadka tijaabada ah ee Demo-2, taas oo qayb ka ah Barnaamijka Shaqaalaha Ganacsiga ee wakaaladda.
Soo saarista hadda waxa la beegsaday 1:10 subaxnimo EDT Arbacada, Noofambar 3, iyada oo la dulsaarayo gantaalka SpaceX Falcon 9 laga soo bilaabo Launch Complex 39A ee NASA's Kennedy Space Center ee Florida, sababtuna tahay xaaladaha cimilada oo aan wanaagsanayn oo la saadaaliyay jidka duulimaadka ee Axadda, Oct. 31, isku day bilow
Xaaladaha cimilada ee jidka jiiritaanka ayaa la filayaa inay soo fiicnaadaan Arbacada, Noofambar 3, furitaanka, iyo saadaasha Cimilada 45aad waxay saadaalisay 80% fursada xaaladaha cimilada wanaagsan ee goobta la bilaabay.
Cirbixiyeennada SpaceX ee NASA ee SpaceX Crew-3 ayaa sii joogi doona xarumaha shaqaalaha ee Kennedy ilaa laga soo saarayo. Waxay wakhti la qaadan doonaan qoysaskooda waxayna heli doonaan warbixin farsamo iyo cimilo dhawrka maalmood ee soo socda.
Crew Dragon Endurance waxaa loo qorsheeyay inuu ku soo xidho xarunta hawada sare 11 pm Arbacada, Noofambar 3. Daah-furka iyo xidhitaanka daboolka ayaa si toos ah uga sii dayn doona Telefishanka NASA, App-ka NASA, iyo mareegta wakaalada.
Duulimaadka Crew-3 ayaa qaadi doona cirbixiyeennada NASA Raja Chari, taliyaha howlgalka; Tom Marshburn, duuliye; iyo Kayla Barron, oo ah khabiir ku takhasusay howlgalka; iyo sidoo kale ESA (Wakaalladda Hawada Yurub) cirbixiyeen Matthias Maurer, kaasoo u adeegi doona sidii khabiir ku taqasusay howlgalka, xarunta hawada sare ee howlgalka sayniska oo lix bilood ah, isagoo sii joogi doona ilaa dhammaadka Abriil 2022.
Hawlgalka Crew-2 ee ay la socdaan astronauts NASA Shane Kimbrough iyo Megan McArthur, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) cirbixiyeen Akihiko Hoshide, iyo ESA (Yurub Space Agency) cirbixiyeen Thomas Pesquet ayaa hadda bartilmaameedsan doona ka soo kabashada xarunta hawada wax ka hor Axadda. Noofambar 7, si uu ugu noqdo Dhulka.
Wakhtigii kama dambaysta ahaa wuxuu dhaafey aqoonsiga warbaahinta ee si shaqsi ah u tebinta bilowgan. Sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus (COVID-19) ee socda, xarumaha Rugta Saxaafadda ee Kennedy ayaa weli u xiran ilaalinta shaqaalaha iyo saxafiyiinta Kennedy marka laga reebo tiro kooban oo warbaahin ah oo horay loo ogeysiiyay. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan aqoonsiga warbaahinta ayaa lagu heli karaa iimaylka: [emailka waa la ilaaliyay]
Talaado, Nov. 2
• 8:45 galabnimo – Waxa bilaabmaya soo tebinta Telefishanka NASA. NASA waxay lahaan doontaa caynsanaan joogto ah, oo ay ku jiraan bilaabista, xidhitaanka, hatch furan, iyo xaflada soo dhawaynta.
Arbaco, Nov. 3
• 1:10 subaxnimo - Bilaabidda
• 11 galabnimo - Duubista
Khamiis, Nov. 4
• 12:35 subaxnimo - Furitaanka Hatch
• 1:10 subaxnimo – Xaflad soo dhawayn ah
Daboolista tooska ah ee NASA TV waxay bilaaban doontaa 8:45 pm Talaadada, Noofambar 2. Wixii NASA TV hoos u dhigista macluumaadka, jadwalka, iyo isku xirka fiidyaha baahinta nasa.gov/live.
Daahfurka sidoo kale waxaa laga heli doonaa inta jeer ee raadiyaha VHF ee hiwaayadda 146.940 MHz iyo inta jeer ee raadiyaha UHF 444.925 MHz, qaabka FM, laga maqlay gudaha Brevard County ee Xeebta Hawada.
Daah-furka daboolka maalinta ee howlgalka NASA ee SpaceX Crew-3 ayaa laga heli doonaa mareegaha wakaaladda. Daboolista waxaa ku jiri doona baahinta tooska ah iyo cusboonaysiinta blogka oo bilaabmaya wax aan ka horrayn 10ka galabnimo Talaadada, Noofambar 2, marka ay dhacdo guulihii tirinta. Fiidiyowga baahinta dalabka ah iyo sawirada bilawga ayaa la heli doonaa waxyar ka dib qaadista. Wixii su'aalo ah ee ku saabsan caymiska tirinta, kala xiriir qolka wararka Kennedy: 321-867-2468. Lasoco daboolka tirinta ee blog-ka bilawga ah ee blogs.nasa.gov/commercialcrew.
Maalinta la bilaabayo, "quudinta nadiifka ah" ee furitaanka iyada oo aan faallooyinka TV-ga NASA laga sii deyn doono kanaalka warbaahinta NASA TV. NASA waxay bixin doontaa quudin muuqaal ah oo toos ah oo ah Launch Complex 39A ku dhawaad ​​48 saacadood kahor qaadista qorshaysan ee howlgalka Crew-3. Iyadoo la sugayo arrimo farsamo oo aan suurtogal ahayn, quudintu waxay noqon doontaa mid aan kala go 'lahayn inta la bilaabayo.
Marka quudku toos yahay, waxaad ka heli doontaa youtube.com/kscnewsroom.
Daawo, Ka Qayb Qaado Baraha Bulshada
U sheeg dadka inay ogaadaan inaad la socoto hadafka Twitter, Facebook, iyo Instagram adoo isticmaalaya hashtag #Crew3. Waxa kale oo aad ku xidhnaan kartaa adiga oo raacaya oo calaamadaynaya xisaabaadkan: